Dagaal dib uga qarxay Gobolka Tigray iyo Mekelle oo lagu wajah... | Universal Somali TV
Tani ayaa ka dambeysay, ka dib markii Dowladda Itoobiya ay sheegtay inay dhammaatay saddexdii maalmood, ee la amray inay isu soo dhiibaan Hoggaanka Tigreyga. Dowladdu waxay sheegtay in fursadaasi ay ka faa'iideysteen kumanaan isugu jira maleeshiyaad iyo booliska deegaanada Tigreyga, oo dowladda isu soo dhiibay.
Demelasha Gebremichael, Taliyaha Booliska Itoobiya ayaa sheegay in Magaalada Mekelle uu ka helay macluumaad sheegaya in Xoogaga Tigreyga iyo dhalinyaro ay abaabuleen in ay isu diyaarinayaan inay xasuuq u gaystaan dadka ku nool magaaladaasi, ee aan deegaanka ahayn.
Ra'iisal Wasaaraha Itoobiya, Abiy Ahmed ayaa Khamiistii sheegay in la gaaray wejigii ugu dambeeyay, ee dagaalka ka dhanka ah Maamulka Gobolka Tigreyga.
Ra'iisal Wasaare Abiy Ahmed ayaa sheegay in laga taxadari doono shacabka ku nool Magaalada Mekelle. Hawlgalkan ayuu ku sheegay mid magaalada looga sifeynayo kuwa la doon-doonayo.
Kan-xigaHoggaanka Tigreyga oo sheegay in duqa...
Kan-horeKhabiirkii kubadda cagta Diego Marado...
56,983,445 unique visits